Job 6 | Shona | STEP | Ipapo Jobho akapindura, akati,
Jobho anoda kufa hake, nokuti shamwari dzake hadzina hanya naye
1 Ipapo Jobho akapindura, akati, 2"Haiwa, dai kutambudzika kwangu kwaiyerwa, Nenjodzi dzangu dzaivunganidzirwa pachiyero! 3Nokuti zvino zvairema kupfuura jecha ramakungwa; Naizvozvo mashoko angu aiva okuvhurumuka. 4Nokuti miseve yoWamasimba yakandibaya mukati mangu, Mweya wangu unonwa uturu hwayo; Zvinotyisa zvaMwari zvazvigadzirira kurwa neni. 5Ko mbizi ingachema kana ine bumhudza here? Ko nzombe ingakuma pazvokudya zvayo here? 6Ko chisinganaki chingadyiwa chisino munyu here? Ko zvichena zvezai zvinozipa here? 7Mweya wangu unoramba kuzvibata; Kwandiri zvakafanana nezvokudya zvinosemesa. 8Haiwa! Dai ndaipiwa zvandinokumbira;
Dai Mwari aindipa zvandinoshuva. 9Dai Mwari aitenda hake kundipwanya, Dai aitambanudza hake ruoko rwake, akandiparadza. 10Ipapo ndainyaradzwa hangu; Zvirokwazvo ndaifara pakurwadziwa kusine tsitsi; Nokuti handina kuramba mashoko oMutsvene. 11Simba rangu ndereiko, randingamirira naro rufu? Mugumo wangu ndoweiko, kuti nditsungirire? 12Simba rangu rakafanana neramabwe here? Nyama yangu indarira kanhi? 13Handizinoshaiwa rubatsiro mukati mangu here? Uchenjeri kwahwo hahuzadzingwa chose kwandiri here? 14Munhu, anorwisa kuziya, anofara kuitirwa nyasha neshamwari dzake; Angazorega kutya waMasimbaose. 15Hama dzangu dzakaita nokusatendeka sorukova, Sokuyerera kwehova dzinopfuura; 16Dzakasviba nokuda kwamazaya echando, Uye panovanda chando; 17Kana zuva ropisa, dzonyangarika; Kana kwopisa dzinopedzwa panzvimbo yadzo. 18Vafambi vanofamba nenzira yadzo vanotsauka, Vanokwira kurenje ndokuparara 19Vafambi veTema vakatarira, Mapoka eShebha akadzimirira. 20Vanonyadziswa nokuti vakanga vane tariro; Vakasvikapo vakakanganiswa. 21Nokuti zvino hamuzi chinhu; Munoona chinotyisa, ndokutya. 22Ko ndakati, `Ndipei here?' Kana, `Ndivigirei chipo chinobva pafuma yenyu here?' 23Kana, `Ndirwirei paruoko rwomudzivisi here?' Kana, `Ndidzikunurei paruoko rwavamanikidzi here?' 24Ndidzidzisei, ndinyarare hangu; Mundidudzire pandatadza. 25Mashoko akarurama ane simba sei! Asi kutuka kwenyu kunotukeiko? 26Munofunga kutuka mashoko here? Nokuti mashoko omunhu, arasha moyo, anotorwa nemhepo. 27Zvirokwazvo munoda kukanda mijenya pamusoro penherera isina baba, Munoda kutengesa shamwari yenyu. 28Naizvozvo zvino chindonditarirai henyu; Nokuti zvirokwazvo handingarevi nhema pamberi penyu. 29Dzokai henyu, ndizvo zvandinokumbira, kusarurama kurege kuvapo, Dzokai henyu, mhaka yangu yakarurama. 30Parurimi rwangu panokusarurama here? Kuravira kwangu hakungasaruri zvinhu zvakashata here?"